Pindura Euro Kuti US dhora
Exchange rate weekly 29/06/2022 20:51
Euro Kuti US dhora kutendeuka. Euro mutengo mu US dhora nhasi pamari yemari yemari.
1 Euro = 1.04 US dhora
Mari yekutsinhana mari ine avhareji kukosha pazuva. Nhamba yekutsinhana kubva kune dzakasimbiswa zvinyorwa. Mabhangi ari kuita basa rekuchinjisa kwe Euro mu US dhora. 1 Euro ikozvino iri 1.04 US dhora. 1 Euro yakawa ne 0.007695 US dhora. Euro mwero unodonha kubva zuro.
Exchange zvazvingava Euro Kuti US dhora
Mwedzi wapfuura, Euro inogona kutengwa 1.03 US dhora. Gore rapfuura, Euro inogona kuchinjaniswa kwe 1.18 US dhora. Makore matatu apfuura, Euro inogona kutengeswa 1.14 US dhora. Pano panoratidzwa chati yeiyo chiyero chekuchinjana kwenguva dzakasiyana. Muvhiki rese, Euro kusvika ku US dhora mwero wekutsinhana wakachinja ne -0.31%. Kwegore, Euro kusvika ku US dhora mwero wekutsinhana wakachinja ne -11.68%.
Currency converter Euro US dhora
Euro (EUR) Kuti US dhora (USD)
1 Euro 1.04 US dhora
5 Euro 5.22 US dhora
10 Euro 10.45 US dhora
25 Euro 26.12 US dhora
50 Euro 52.23 US dhora
100 Euro 104.46 US dhora
250 Euro 261.15 US dhora
500 Euro 522.30 US dhora
Kana iwe uine 10.45 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands vanogona kuchinjaniswa kwe 10 Euro. Iwe unogona kuchinjana 26.12 US dhora ye 25 Euro . Unogona kutenga 50 Euro ye 52.23 US dhora . Unogona kutenga 104.46 US dhora ye 100 Euro . Kana iwe uine 261.15 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands inogona kutengeswa ye 250 Euro. Kushandura 500 Euro inodhura 522.30 US dhora.
Euro Kuti US dhora Exchange zvazvingava
Euro Kuti US dhora nhasi pa 29 Chikumi 2022
29.06.2022 1.050397 -
28.06.2022 1.050397 0.000877 ↑
27.06.2022 1.04952 -
26.06.2022 1.04952 -
25.06.2022 1.04952 0.000216 ↑
Nhasi ku 29 Chikumi 2022, 1 Euro mitengo 1.050397 US dhora. 28 Chikumi 2022, 1 Euro inodhura 1.050397 US dhora. 27 Chikumi 2022, 1 Euro inodhura 1.04952 US dhora. Euro kusvika US dhora on 26 Chikumi 2022 - 1.04952 US dhora. 25 Chikumi 2022, 1 Euro = 1.04952 US dhora.
Euro uye US dhora zviratidzo zvemari uye nyika